Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience
Goolka Barnaamijka: Sii sayniska ku dhawaad maalinta cudurada maskaxda iyo dabeecada si sax ah loo ogaado, looga hortago, loola dhaqmo.
Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience waa urur madax banaan, oo ay aasaasay Hay'adda McKnight Foundation, taas oo ka shaqeysa in ay soo qaadato sayniska ku dhow maalinta maalinta cudurada maskaxda iyo dabeecada si sax ah loo ogaado, looga hortago, loona daaweeyo.
Sanduuqa Taageerada Maaliyaddu wuxuu taageerayaa baaris cusub oo loo marayo saddexda abaal-marin oo sanadle ah oo raadinaya baadhayaasha oo baaritaankoodu muujinayo ballanqaad ku aaddan bulshada in ay ka hortagaan, daaweynayaan, iyo in la daaweeyo cuduro aad u ba'an. Cilmi-baarista ay taageerto Sanduuqa Maaliyadda ayaa kordhiyay fahamka naafannimada sida cudurka Alzheimer, cudurka Parkinson, dhowr sclerosis, dhaawacyada laf-dhabarka, iyo kuwo kale oo badan.
Sanduuqa Dhaqaalaha ee Neuroscience wuxuu maamulaa saddex abaalmarin. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan abaal-marin kasta-oo ay ku jiraan waqtiyada kama dambaysta ah ee codsiyada, shuruudaha u-qalmitaanka, kuwii hore helay, iyo faahfaahin kale-raac xiriirada hoose.
Si saynisyahannadu ugu turjunto daahfurka sheybaarka ku saabsan maskaxda iyo nidaamka dareemayaasha ee loo adeegsado baaritaannada iyo daweynta si loo wanaajiyo caafimaadka aadanaha.
Cilmi-baareyaasha cusub ee horumarinta teknoolojiyada cusub ama adeegsiga teknoolojiyada siyaabo cusub oo loo ballaariyo cilmi-baarista neuroscience
Cilmi-baadhayaasha marxaladaha hore ee aasaasida shaybaarada madaxa banaan iyo bilaabista inay xoogga saaraan dhibaatooyinka barashada iyo xasuusta.
Neuroscience News, Fikradaha, iyo Khayraadka